I-MOZU DOLL ye-anime ye-Anime ye-Sex Dolls ye-High-Quality Specialty Store
Unodoli we-MOZU ongaqondakaliyo we-TPE ooNodoli beSini be-anime
I-MOZU DOll ithetha ukuba igama le-brand yaseTshayina yi "Doll yomlingo". Bonke oonodoli be Unodoli we-MOZU uphawu ziidemon zomnye umlinganiso. Umseki ngusomashishini omncinci othanda oopopayi kunye nenkcubeko ye-cosplay. Iqela elincinane elidibanisa ukuyila kwasekuqaleni, uphuhliso, ukuveliswa kunye neentengiso eziqokelelwe ndawonye ukuze ziphuphe ukudibanisa izinto ezimbini eziyinyani kunye nenyani, ukuthobela ingcamango "yokuphula imiqobo ye-dimensional". Phuhlisa iintlobo ngeentlobo zesitayile se-2D yefantasy kunye noonodoli beedemon abanyanisekanga be-3D.
Uphawu: Unodoli we-MOZU
Material: I-TPE sex Doll Uhlobo: Oonodoli besini, Unodoli weDemon, unodoli omkhulu wesondo webele, unodoli wesondo ohendayo, njalo njalo.
Intshayelelo: Ukuzalwa ngakunye kweMozu Doll inomlingiswa wayo. I-Makeup S, ejongene nokwenza iimveliso, ngumntu odumileyo obalaseleyo kwibala le-cosplay, kwaye unembonakalo ecokisekileyo. Eyona nto yandimangalisa kakhulu kukuba zonke iimveliso zixhotyiswe ngeengubo ezigqwesileyo ze-cosplay kunye nezixhobo, eziyi-100% ngokuhambelana nemizobo yemveliso. Ngokuzalisekisa "ukuhlanganiswa kobuhle", ingqokelela kunye nexabiso lomboniso weedoli ze-monster ziya kuba phezulu. Ukongeza, i oonodoli bothando nge-2D kusupure njengoko undoqo unoluhlu olubanzi lokwenziwa konodoli, kwaye ngokungqinelana nencasa yomthengi ngamnye, ukubonelela ngeendlela ezahlukeneyo "zenxalenye enye yeendima ezininzi" zikasathana unodoli ziya kuzaliseka. "I-MOZU DOLL" ngunodoli wefantasy we-anime ojika i-fantasy kwiscreen sePC ibe yinyani.
Izinto eziluncedo zikaMozu Doll:
1. I-100% ihambelana nomzobo wemveliso, into oyibonayo ngunodoli onawo
2. Ingqokelela kunye nexabiso lomboniso likaMozu Doll liya kuba phezulu
3. Unodoli wefantasy we-anime ojika ifantasy kwiscreen sePC ibe yinyani